YouTube dia mampiditra lisitra vaovao misy safidy video | Androidsis
YouTube dia mampiditra lisitra safidy vaovao ho an'ny fampiharana Android
Ny fampiharana YouTube tsy hoe mahazo dera be aho noho ny hasarotan'ny fifandraisany amin'ny tabany rehetra. Enga anie ka hisy fotoana hahafahan'izy ireo mandefa interface izay manararaotra ny atiny kalitao goavambe ananany amin'ny fanavaozana ny rindrambaiko. Fampiharana iray izay manohy mandray vaovao indraindray, saingy manantena izahay fa indray andro any dia hahazo fanovana lehibe izy io hanolorana fahatsapana hafa avy amin'ny finday avo lenta.
Izao dia rehefa mamelona menio safidy kara-pifandraisana amin'ny karatra ao amin'ny fampiharana YouTube ho an'ny Android i Google. Ity menio ity dia misy safidy hanovana ny kalitao ny filalaovana horonantsary, ny fampiasa ho an'ny Google Cardboard sy ny fiasa hafa azo jerena amin'ny fipihana ny bokotra telo-teboka eo amin'ny zoro ambony ambony rehefa milalao horonantsary amin'ny fitaovanao.
Taloha io ny menu dia nitsinkafona teo ambonin'ilay horonan-tsary izay nilalaovanao, ny fanovana izao dia mampiditra menio fomban-karatra iray indray ary mipoitra avy eo ambanin'ny efijery. Fomba vaovao iray izay mifanindran-dàlana amin'ny fiteny famolavolana mifanaraka kokoa amin'ny atao hoe Android sy io Material Design io.
Ity zava-baovao ity dia avy amin'ny lafin'ny mpizaraNoho izany, raha mbola tsy hitanao fa misy amin'ny fitaovanao ity dia ora maromaro na andro vitsivitsy vao afaka mifanerasera amin'ny fomba hafa miaraka amin'ilay menio izay misy Material Design hanomezana traikefa mpampiasa tsaratsara kokoa.
Miaraka amin'ity menio vaovao ity, YouTube te-hanadio ny habaka izay andefasana ireo horonan-tsary ary ireo safidy ireo dia azo alamina amin'ny faritra mety kokoa ho an'ireo angona mifandraika amin'ilay horonan-tsary mihitsy, toy ny fanehoan-kevitra. Fanavaozana kely ilaina mba hanatsarana ny traikefa amin'ny fampiasana fampiharana YouTube izay mila fanovana marina ary vao avy nahalala izany izahay Hampifandray chat ho an'ny contact aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » YouTube dia mampiditra lisitra safidy vaovao ho an'ny fampiharana Android
4 amin'ireo lalao tsara indrindra navoakan'ny Crescent Moon Games farany teo
Ny Nexus Player nanjavona tao amin'ny Google Store